बेलारुसलाई रुसमा मिलाउन चाहन्छन् पुटिन ? | Ratopati
मस्को । बेलारुसको राजधानी मिंस्कमा २० डिसेम्बरका दिन करिब दुई हजार मानिस भेला भएर ‘साम्राज्यवादी रुस’ को विरोधमा नारा लगाइरहेका थिए ।
उनीहरु रुस र बेलारुसबीच सम्भावित गठजोडको विरोधमा प्रदर्शन गर्दै थिए । त्यतिबेला दुई देशबीच आर्थिक सम्बन्धलाई लिएर छलफल भइरहेको थियो ।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकाशेन्कोबीच सेन्ट पीटसबर्गमा भेटवार्ता भएको थियो । दुवै राष्ट्रपतिबीच १५ दिनको अन्तरालमा दोस्रो पटक भेटवार्ता भएको थियो ।
रुसी राष्ट्रपति पुटिनले भेटवार्तापछि ‘सहमति नजिक’ पुगेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । यद्यपि रुसी वित्तमन्त्री मेक्सिम ओरेश्किनले भने दुई पक्षबीच तेल र ग्यासका विषयमा सहमति जुट्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
प्रदर्शनकारीहरु सोभियत संघ विघटनपछि प्राप्त स्वतन्त्रतालाई दुवै देशबीच बढ्दो आर्थिक सम्बन्धले खोस्ने हो कि भन्नेमा चिन्तित थिए । प्रदर्शनकारीहरुको हातमा प्लेकार्ड थियो । तिनमा लेखिएको थियो, ‘पहिला क्राइमिया र अब बेलारुस, कब्जा बन्द गर ।’ दुवै देशबीच सम्भावित गठजोडलाई लिएर बेलारुसमा विरोध प्रदर्शन जारी छ ।
पुटिनको योजना के छ ?
२०१४ मा क्राइमिया प्रायद्वीपलाई रुसमा मिलाउने र पूर्वी युक्रेनमा पृथकतावादीहरुको समर्थनका कारण बेलारुसमा पुटिनका बारेमा सन्देह बढ्दै गएको छ । पुटिन पछिल्लो दुई दशकदेखि रुसको सत्तामा छन् ।
उनको यो कार्यकाल सन् २०२४ सम्म रहने छ । त्यसपछि पनि सायद उनी सत्तामै रहनेछन् । किनकि संविधान संशोधनका लागि प्रधानमन्त्रीसमेत पुरै मन्त्रिपरिषदको राजीनामा लिइएको छ ।
८ डिसेम्बरमा रुस र बेलारुसका दुई शीर्ष नेताको उपस्थितिमा ‘युनियन स्टेट अफ रुस र बेलारुस’ को २० औँ वार्षिकोत्सव मनाएका थिए । दुवै देशबीच ८ डिसेम्बर १९९९ मा यो सन्धि भएको थियो ।
‘युनियन स्टेट अफ रुस र बेलारुस’ को अर्थ बेलारुसलाई रुसमा मिलाउने नै हो जो काजगमै सीमित रहँदै आएको छ । दुई नेताबीच एक पटक फेरि छलफल सुरु भएपछि बेलारुसका जनतामा डर बढेको हो । ‘युनियन स्टेट अफ रुस र बेलारुस’लाई दुई देशबीच राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक मेलमिलापका रुपमा पनि हेरिएको छ ।
बेलारुसको राजधानी मिंस्कमा बेलारुसलाई रुसमा मिलाउने विषयमा खुब चर्चा हुने गरेको बताइन्छ । सार्वजनिक स्थलमा हुने चर्चाअनुसार पुटिनले बेलारुसलाई रुसमा मिलाउन सकेमा सन् २०२४ पछि पनि सत्तामा रहिरहन उनलाई ठूलो मद्दत पुग्नेछ ।
रुसको संविधानमा एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति हुन पाउँदैन ।
गत डिसेम्बरमा पुटिनले धम्की दिदैँ भनेका थिए, ‘युनियन स्टेटमा सामेल नभई बेलारुसलाई सहुलियत दरमा ग्यास दिनुको अर्थ छैन । हामी लामो समयसम्म बेलारुसलाई अनुदान दिएर गल्ती गर्ने पक्षमा छैनौँ । किनकि युनियनको हिस्सा बन्न बाँकी नै छ ।’
मुजर्गस भन्छन्, ‘बेलारुस रुसको हिस्सा हो भन्ने सोचलाई पुटिनले कहिल्यै त्यागेका छैनन् ।’
भारतमा कोरोनाको इपिसेन्टर बन्दै मुम्बई, चार चिकित्सकमा पनि संक्रमण
रुपन्देहीमा कोरोनाको आशंकामा आइसोलेनमा रहेका एक जनाको मृत्यु
एशियाकै धनाढ्य ज्याकमाले पठाएको १ लाख थान मास्क नेपाल आइपुग्यो